Fact Check: မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုကွန်ကရစ်လမ်းမှာ ဝါးတွေထည့်ပြီး ဖောက်လုပ်သလား - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုကွန်ကရစ်လမ်း ဖောက်လုပ်ရာမှာ ကွန်ကရစ်အတွင်း သံချောင်းတွေအစား ဝါးလုံးတွေထည့်ပြီး ဖောက်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပုံနဲ့တကွရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ရေးသားမျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီပိုစ်မှာ ဖောက်လက်စကွန်ကရစ်လမ်းရဲ့ လမ်းအတွင်းသားထဲ ဝါးလုံးတွေ စီပြီး ခင်းထားတဲ့ပုံတွေကို “ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုလမ်း ခဂရန်းယန်ကျေးရွာမရောက်မှီမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လမ်းခင်းနေမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးကိုအသုံးပြုပြီး ခင်းလမ်းနေတာဟာ အရည်အသွေးပြည့်မှီပါ့မလား? လမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ စာချုပ်စာတမ်းမှာရော ဒီလိုဝါးအသုံးပြုဖို့ ချုပ်ဆိုတတ်ကြသလား? အစိုးရရဲ့လမ်း တင်ဒါဒီဇိုင်းမှာရော ဒါမျိူးဒီဇိုင်းတွေရှိပါသလား? သိတဲ့သူများ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပေးကြပါ။ လေ့လာချင်လို့ပါဗျ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး ဒီနေရာ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာတွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေတာတွေ့ရပါတယ်။
အထက်ပါပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဲ့ဒီလမ်းကို ဖောက်လုပ်နေတဲ့ အင်ခိုင်ဘွမ်းကုမ္ပဏီက ဒီလိုဝါးလုံးတွေကို ဖြန့်ခင်းထားတာဟာ ကွန်ကရစ်ကတွင်း သံချောင်းတွေအစား ဝါးလုံးတွေထည့်တညမဟုတ်ပဲ လမ်းမြေသား အတွင်းက ရေစိမ့်ထွက်နေတာကြောင့် သဲကျောက်မှုန့်တွေ အရင်ခင်းဖို့အတွက် လမ်းဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားလာတာကြောင့် လမ်းအောက်ခံသဲကျောက်တွေ ခင်းရာမှာ မျက်နှာပြင်ညီညာစေဖို့ ဝါးလုံးတွေကို အကွက်ရိုက်ပြီး အကွက်အတွင်း သဲကျောက်တွေဖြူးထည့်တာသာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုကွန်ကရစ်အတွင်း ဝါးလုံးတွေထည့်သွင်းကာဖောက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ လမ်းမြေသားအတွင်း ရေစိမ့် ထွက်နေတာကြောင့် သံကျောက်မှုန့်အရင်ခင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပြီး အဲ့လိုခင်းရာမှာ မျက်နှာပြင်ညီညာစေဖို့ ဝါးလုံးတွေအကွက်ဖော်ကာ အဲ့ဒီ့အကွက်အတွင်း သံကျောက်မှုန့်တွေဖြူးမှာဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန်လည်ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုကွန်ကရစ်လမ်းမှာ ဝါးတွေထည့်ပြီး ဖောက်လုပ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပဲ သံကျောက်မှုန့်ခင်းရာမှာ မျက်နှာပြင်ညီညာစေဖို့ ဝါးလုံးတွေကို ယာယီအကွက်ဖော်ခင်းထားတာသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
Title:Fact Check: မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာဘွမ်-ပူတာအိုကွန်ကရစ်လမ်းမှာ ဝါးတွေထည့်ပြီး ဖောက်လုပ်သလား
Fact Check By: Linn YU(လင်းယု)
Tagged Ministry of Constructionဆောက်လုပ်ရေးဆွမ်ပရာဘွမ်
May 15, 2020 May 15, 2020 နေရာမောင်
April 27, 2021 April 27, 2021 နေရာမောင်